Niala tsiny ny Jirama: miverina toy ny mahazatra ny fizarana faktiora | NewsMada
Niala tsiny ny Jirama: miverina toy ny mahazatra ny fizarana faktiora
Nahatsapa tokoa ny Jirama fa tsy nahomby ny fandaminana tamin’ny nametrahana ilay “facture par lots”teo. Vahana koa ny olana ho an’ireo faktiora midangana.
Miverina amin’ny laoniny aloha! Niaiky ireo mpitantana ny Jirama fa niteraka savorovoro ho an’ny mpanjifa tokoa ny fepetra napetrany mikasika ny fandoavana faktiora, niainga tamin’ilay « factures par lots », ka lasa nahazo indroa (avrily sy mey) ny mpanjifa tao anatin’ny iray volana jona teo. Nisy tamin’izany koa ny faktiora nidangana be ka vao mainka nahatezitra ny mpanjifa. Manoloana izany, nanapa-kevitra ny filankevi-pitantanan’ny Jirama sy ny fitantanana foibe, fa aato aloha ny fampiharana izany eto Antananarivo ka miverina toy ny mahazatra ny fizarana faktiora. Ahemotra hatramin’ny faran’ny volana ny fe-potoana fandoavana faktiora fa tsy 10 andro toy ny mahazatra intsony.
Tranoheva hamaha ny olana
Nandraisan’ny Jirama fepetra koa ny mikasika ilay fidangan’ny faktiora. Niaiky ny fahadisoany ity orinasa ity ka napetraka eny amin’ny masoivoho enina eto Antananarivo ny tranoheva manokana, handray ny fitarainan’ny mpanjifa tsirairay, manomboka amin’ny alatsinainy 6 jolay izao. Hanampy ny etsy Antanimena efa nandray ny mpanjifa hatramin’izay ireo. Hikarohana vahaolana eo no ho eo ny olan’ny mpanjifa tsirairay. Afaka mangataka fanemorana hatramin’ny enim-bolana ny fandoavana azy ho an’ireo manana faktiora midangana tsy toy ny mahazatra. Hanitsy ny tarehimarika fandaniana (index) ny Jirama, hamoahana ny tena faktiora. Ho tombanana ny fepetra rehetra napetraka ary ho hita eo ny manaraka.
Niara-nanazava ireo ny filohan’ny filankevi-pitantanana (PCA) Jirama, Andriamanampisoa Solo, ny tale jeneraly Andriamanga Vonjy, ny solotenan’ny mpanjifa ao anaty CA, Rabetsara Ralita ary ny mpikambana hafa.